Sidee dagaalkii ugu horreeyay kadib Joshua culeys culus kadib Klitschko: sawirrada | TeraNews.net
Sidee dagaalkii ugu horreeyay kadib Joshua culeys culus kadib Klitschko: sawir
qoraaga artem La daabacay 09.11.2017
Kubad sameeyaha caan ah ee reer Yukreeniyaan ee caan ka ah Britain, Anthony Joshua, ayaa mar kale ku guuleystay guul horudhac ah oo uu ka helay ninka ay xafiiltamaan ee reer Cameroon - Carlos Takama. Dagaalku wuxuu ka dhacay Millennium Stadium ee caasimada Wales, Cardiff. Xusuusnow inaan ka hadlayno nin aad u Ingiriis ah oo ku guuleystay labo ka gees Wladimir Klitschko bishii 29 bishii Abriil 2017 ee sannadka isagoo garaacay farsamo ahaan garoonka Wembley ee London.
Khubaro isboorti ayaa uhelaya waxyaabo badan oo udub dhexaadka u ah ciyaaraha fudud ee culus ee ka dhashay qulqulaha Albion oo ay la leeyihiin Afrikaanka dhexe. Markii ay noqotay, tababarayaasha Anthony Joshua waxay diyaarinayeen ciyaartooyda inay la dagaallamaan xirfadleyda reer Bulgaria, Kurbat Pulev, kaas oo, dhaawac dartiis, uu lumiyay tartankii 12 maalmood ka hor Koobka Adduunka. Si aysan u baajin tartan, qabanqaabiyeyaashu waxay bilaabeen raadinta qof ka soo horjeeda Ingriiska. Waxay isu rogtay inay adag tahay sidii loo heli lahaa culeys culus, iyo xitaa mid dhaadheer, waana sababtaas sababta ay ugu degeen Cameroon.
Dagaalku wuxuu u rogay mid xiiso u leh taageerayaasha, kuwaas oo horeyba ugu jiray wareega 4 ayaa ka mahadceliyay tababarka iyo awoodda barta Afrikaanka, kaasoo burburiyey Briton. Sikastaba, durba wareegii tobnaad, nasiibka ayaa u jihaystay ninka Ingriiska ah, kaasoo ugu danbeyntii ku guuleystay dagaalka isagoo uga mahadcelinaya garsooraha. Isagoo xukumaya jawaabta ay dhagaystayaasha ka helayaan baraha bulshada, Takam ayaa cagtiisa ku jiray oo wuu sii wadan karaa ciyaarta, sidaas darteedna wuxuu weydiinayaa su'aalo aan fiicnayn abaabulayaasha tartamada.
Marka loo eego guuleystaha, diyaar garow la'aan ayaa ka hor istaagtay in Cameroon laga tuuro. Shaqaalaha tababarka waxay Joshua u diyaariyeen dagaalka labo mitir Kurbat Pulev, la qabsiga mawqifka iyo feerka koritaanka qofka ka soo horjeeda. Waxaa laga yaabaa in ka shaqeynta sidii ula shaqeynta ragga yar yari ay gacan ka geysan laheyd orodyahanku inuu hormariyo Afrikaanka. Laakiin sida ay yiraahdaan, guuleystayaasha aan la xukumin - suunka horyaalnimada iyo sacabbada kumanaan kun ee 75 ee dadku waxay aadaan Briton Anthony Joshua.
Kala googoysyada kala goysyada: sababtuna waa maxay iyo waa maxay waxyeelo
Adidas CG Polta AKH I sneakers: symbiosis of Climacool JawPaw iyo Samba
Shaaha Matcha: waa maxay, faa iidooyinka, sida wax loo kariyo oo loo cabbo
Xiaomi Yi Sport - kamarad ficil dhammaan munaasabadaha
Treadmill: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Alaabooyinka Waxyaabaha Dabka Ka Guba: Khuraafaadka Internetka